Kakade ngo-February, lapho phansi namanje embozwe yiqhwa, balimi eziningi acatulule ngekusasa isivuno: ukuthenga imbewu, ukulungiselela emabhokisini zokutshala zokugcina. Growing utamatisi kusuka okusanhlamvu encane, ezazibazungezile ngokunakekela, bonke benethemba lokuthola umphumela izithelo ezinhle, namanzi futhi sesivuthiwe, kodwa abanye amaphupho abanikazi ngeke zafezeka. Futhi zonke iphutha sifo, ngesikhathi esifushane ukubhubhisa isitshalo. Umbuzo kanjani ukulwa Phytophthora ku utamatisi, of interest abaningi, ngoba isifo uyakwazi ukuyibhuntshisa yonke imizamo kanye ukubhubhisa ngokuphelele kwezitshalo.
Empeleni, inkinga iqala ngoJulayi kokubili izithombo abamba ukushisa, kanti lowo ezikhula endle. Kwakuphakathi nalesi sikhathi livela okulimaza sekwephuzile notamatisi. Indlela yokubhekana nalesi sifo futhi ukuthi kungenzeka ukulondoloza isitshalo? Yiqiniso, okuhle kakhulu emuva ngo-June ukuqhuba zokuvimbela, ngoba lokhu suit izidakamizwa ezifana "Zircon" futhi "fitosporin". Utamatisi kwanda endle, londoloza kulula ngoba ingelashwa nge omunye izixazululo equkethe zethusi. Ngemva kwalokho, imbewu yesithelo ayikwazi kudliwa amasonto 3. Esikhathini abamba ukushisa, spray temabhodlela izixazululo zethusi bengayi, ngoba utamatisi asetshenziswa ngesikhathi esisodwa.
Indlela ukusindisa utamatisi kusuka okulimaza sekwephuzile ngaphandle asebenzise izidakamizwa eziyingozi kwezempilo? Kungenjalo, ongasisebenzisa 5-% iodine ngamunye 1 ml ngalinye 1 L amanzi. Okokuqala sidinga ukuphula ngokuphelele off the amahlamvu ethintekile, banjalo ephuzi namabala amnyama, khona-ke udinga esivulekile fafaza stem nezithelo. Phinda ukwelashwa wenziwa emva kwezinsuku 3. Isixazululo akusho Roll off the amahlamvu, ungakwazi ukwengeza insipho.
Uma unesithakazelo umbuzo kanjani ukulwa Phytophthora ku utamatisi, kuyafaneleka uzama amboza umhlabathi ngaphansi izitshalo. Le ndlela kunciphisa kakhulu amathuba lesi sifo, ngoba kubangela micro-isikhunta ezinhlamvu, okuyinto uhlala emhlabathini. Uma unesithakazelo kangakanani ukulwa Phytophthora ku utamatisi ngendlela ephephile, kufanele uthenge ekhemisi 10% isixazululo calcium chloride, hlambulula ngamanzi okudingayo isilinganiso 1: 4. Ukulungiswa okuholela kuyadingeka ukuze fafaza izimbali sepals kanye peduncle, ngoba nabo ewela Phytophthora izithelo.
Ukwazi kanjani ukulwa Phytophthora ku utamatisi, ungagcina okungenani ingxenye kwezitshalo. Lapho kuvela izimpawu zokuqala kufanele ngokushesha aphule izimbali nezavyazavshiesya, ngoba, ngakolunye uhlangothi, bayindlu umthombo ukutheleleka, futhi ngakolunye, ukudonsa ijusi elalivela esihlahleni, ekuvimbeleni sokuvuthwa izithelo kwakhiwa. Kulandele makaqhubeke zonke ichithekile, amaqabunga aphansi. Lesi sitshalo kumele kancane kancane balahle kubo, phakathi nonyaka ka-July kufanele kwasala ithiphu, esehlanganise zokugcina ethulula ibhulashi.
Ekupheleni kwenyanga kumele prischipnut utamatisi ukumisa ukukhula kwabo. Izithelo sezivuthiwe ngokushesha, udinga ukwakha isitshalo esimweni esicindezelayo. Ukuze wenze lokhu, ungakwazi Dabula ingxenye izimpande, ngaleyo ndlela anciphise supply izakhi, ukunciphisa ukuthambisa, hhayi ukwenza sigqoka. Ngaphansi kwezimo ezinjalo, shesha yokuvuthwa utamatisi.